जुकरबर्ग र गेट्सले दिए पैसा कमाउने टिप्स, युवाले सिके मालामाल ! Bizshala -
जुकरबर्ग र गेट्सले दिए पैसा कमाउने टिप्स, युवाले सिके मालामाल !
बिजिनेश इन्साइडरका अनुसार एक फेसबुक लाइभ प्रोग्राममा बिल गेट्सले भनेका थिए कि समझदार हुनका लागि कुनै एउटा मात्र तरिका वा शैली हुँदैन । अलग–अलग क्षमताको विकास गर्नसक्ने कलाले तपाईलाई सफल बनाउनसक्छ । गेट्सले सो क्रममा भनेका छन् कि उनलाई पहिला जसको आइक्यू लेभल राम्रो छ, उसले सबै कुरा गर्नसक्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर त्यो यथार्थ होइन रहेछ । तपाईको आइक्यूू लेभलले मात्रै तपाईलाई इन्टलिजेन्ट बनाउँदैन, बरु तपाईभित्रको अलग–अलग खालका क्षमताले तपाईलाई इन्टलीजेन्ट बनाउँछ । गेट्सका अनुसार प्रायः भनिन्छ स्मार्ट र सामान्य आइडियाले सबै कुराको समाधान निकाल्न सकिन्छ, तर उनले यो कुरालाई हालसम्म पनि बुुझेका छैनन् ।
काम गर्न आएका लमजुङ्गका राम घले दुवईमा “डन” !
-प्रकाश बञ्जारा यूएई । झट्ट हेर्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ लमजुङ्ग घर...
मट्टितेल छर्किए पनि अब खरको छानामा आगो लाग्दैन, नौलो
-सञ्चिता घिमिरे ललितपुर । खरको छानामा मट्टितेल छर्केर आगो...
टाट पल्टिएर यूएई छिरेको नेपाली ठिटो कसरी बन्यो नेस्ट्लेको
-प्रकाश बञ्जारा यूएई । समयले व्यक्तिलाई रुवाउँछ, हसाउँछ, टुक्राउँछ,...
बिजुली बचाउन चीनको गज्जब आइडिया, बनाउँदैछ कृत्रिम जून
काठमाण्डौ । चीनले आफ्नो शहरी इलाकाबाट सडकबत्ती हटाउने तथा बिजुली...
हङकङ,अमेरिकाको कोशेली बन्न थाल्यो नेबुला, शिखर चुम्ने दुई
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । परम्परालाई प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग र...
यो हो विश्वकै महङ्गो सब्जी, मूल्य प्रतिकेजी रु.१.३१ लाख !
काठमाण्डौ । महंगीले दिनप्रतिदिन आकाश छुन खोजिरहेको छ । पेट्रोल,...
सफलताका लागि बिल गेट्सका ६ सामान्य नियम, जुन प्रोफेसनल कलेजमा
काठमाण्डौ । अक्टोबर २८ अर्थात बिल गेट्सको जन्मदिन । उनको जन्मदिनको...